पूर्वप्रधानमन्त्रीका छोराले नायिका भित्राएपछि घरमा डिभोर्स – YesKathmandu.com
पूर्वप्रधानमन्त्रीका छोराले नायिका भित्राएपछि घरमा डिभोर्स
मङ्गलबार १२, फागुन २०७१
काठमाडौं, । पैसा र प्रेमले गर्दा पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दको घरमा भाँडभैलो मच्चिएको छ । बुढेसकालमा पार्टीभित्र उग्र झगडामा फसेका चन्दका छोरा भूपेन एक हिरोइनसँगको चक्करमा फसेपछि घरमा कलह बढेको छ । फिल्म क्षेत्रमा समेत लागेका भूपेनले नायिक सौजन्य सुब्बालाई दोस्री श्रीमतीका रुपमा घरमा भित्राएपछि उनकी पहिली श्रीमती अमृत सिंहको रुवावासी भएको छ ।
अमृतसँग उनले सम्पत्तिका लागि बिहे गरेका थिए । नेपाली सेनाका पूर्व जर्नेल तोरणबहादुर सिंहकी छोरी अमृतलाई परिवारले टन्न सम्पत्ति दिएको थियो । पहिलो बिहे एक भारतीय व्यापारीसँग गरेकी उनको ती व्यापारीसँग डिभोर्स भएपछि भूपेनसँग दोस्रो बिहे भएको थियो ।
अमृतको नाममा छाउनीमा जग्गा थियो । बिहेपछि सोही जग्गा ५ करोडमा बेचेर भूपेनका लागि गाडी र भैंसेपाटीमा घर किनेकी थिइन् । सोही घरमा दुवैजना बस्दै आएका भूपेन सौजन्यसँग लागेपछि उनीहरुबीच विवाद बढेको थियो । पटकपटक विवादमा तानिएकी सौजन्यसँग बिहे नै गर्ने निर्णयमा भूपेन पुगेपछि उनीहरुबीच डिभोर्सको स्थिति आएको हो । सौजन्य यतिबेला अमेरिकामा छिन् । भूपेन पनि सौजन्यसँग बिहे गरेर बस्ने योजनासहित अमेरिका जाने तयारीमा छन् ।
सुध्रियो पारस–हिमानी सम्बन्ध, थाई जेलमै भेटिन् पारसलाई हिमानीले
एमालेमा माथी मिल्दै तल भत्किदै
शक्तिशाली महिलाको सूचीमा स्वीफ्ट
भारतीय हिरोइनको स्वागतमा नेपाली सेनाका कर्नेल
सुटुक्क गरिन अभिनेत्री झरना बज्राचार्यले भारतीय ब्यापारीसँग बिहे
यी सेलिब्रेटी,जस्ले भत्काए जात भातको साँघुरो पर्खाल …
भाङ मिसाएको लड्डु खाएर हाँसेको हास्यै भएँ
मिस नेपालका नाममा यसरी पनि ठगिन्छन छोरी चेलीहरु
अभिनेता भुवन केसीको आत्मकथाको नाम ‘प्ले ब्वाइ’ !
म १४ लाखको घडी चोर होइन, मलाई फसाउन खोजियोः रामहरी
प्राधिकरणद्वारा पुन: १०५ कर्मचारीको सरुवा, कोको परे त सरुवामा?
प्रदेशसभा सदस्यलाई काठमाडौँमा सपथ गराउने सरकारको निर्णयप्रति बाबुराम रुष्ट
जब गृहमन्त्री शक्ति बस्नेतले प्रधानमन्त्रीसँग माफी मागे………
भारतले सिक्किम र दार्जीलिङमा नाकाबन्दी लगायो
भरतपुरमा प्रहरीदेखि मुख्य निर्वाचन अधिकृतसम्म शंकाको घेरामा